Dablay hubaysan oo labo nabadoon ku dishay magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaDablay hubaysan oo labo nabadoon ku dishay magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud
Maleeshiyaad beeleed Caabudwaaq.
Caabdudwaaq-(Puntand Mirror) Dablay aan la aqoon ayaa xalay ugu yaraan labo nabadoon ku dilay magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud, sida ay sheegeen dadka deegaanka.
Labada nabadoon ee la dilay ayaa magacyadooda la dhihi jiray, nabadoon Fanax Aadan iyo nabadoon Maxamed Bare Diini.
Dilka nabadoona ayaa lala xiriirinayaa aanooyin qabiil, sida ay sheegayaan dadka deegaanka.
Sidoo kale dad gaaraya todobo qof oo shacab ah ayaa ku dhaawacmay rasaasta dablayda ay rideen.
Dilalka ku salaysan aanooyinka qabiilka ayaa ah kuwo muddo sanado badan kasoo jiray dhulka Soomaalida.